Ihe eserese - Geofumadas
Ngwa na ego maka sayensị na-emekọ na-amụ na mmepe nke obodo map.
Tụlee ọnụ ọgụgụ mba
Anyị na-ele anya na peeji na-adọrọ mmasị, nke a na-akpọ thetruesizeof, ọ dị na ụgbụ ruo afọ ụfọdụ na n'ime ya - n'ụzọ dị mkparịta ụka na ụzọ dị mfe - onye ọrụ nwere ike iji ntụnyere nke mpaghara elu n'etiti otu ma ọ bụ ọtụtụ mba. Anyị ji n'aka na mgbe ị na-eji ihe mmekọrịta a, ị ga-enwe ...
Imirikiti ọrụ nyocha ihe onyonyo nke chọrọ Erdas Imagine ma ọ bụ sọftụwia ENVI dị ugbu a na ntanetị maka EOS Platform. Ọrụ igwe ojii ọhụụ ọhụrụ a nke EOS Data Analytics bidoro nye ndị ọkachamara GIS bụ azịza zuru oke maka ọchụchọ, nyocha, nchekwa na anya nke nnukwu ...
Geofumadas na-agwa gị ka ị mara akwụkwọ ndị dị n'Ịntanet n'ọdụ ụgbọ mmiri IGN Spain!
Nke gara aga: Ilebara ihe niile gbasara ọdịdị ala na mmepe nke eserese na mba ọ bụla anya mepụtara ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ọrụ a dị mkpa. N'ọnọdụ ụfọdụ dabere na Mịnịstrị Nchekwa ma ọ bụ ọzọ dị ka eserese eserese nke mba ọ bụla, ụdị a ...
Cartografia, Internet na Blogs, mbụ echiche
Ọtụtụ ohere nke itinye Web GIS n'ọrụ ugbu a
Isiokwu ikwu taa bụ GIS Web. Maka 'ndị na-amaghị akwụkwọ', enwere ike ịtụgharị ya 'GIS na webụ', mana gịnị ka nke a pụtara n'ezie? Kedu ihe ọ bụ? Gini kpatara 'nwere otutu uzo eji etinye ya' dika ekwuru ya n'aha nke post a? Enwere ihe ise mere Eric van Rees ji ...
The Twilight n'ọtụtụ
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị site na Regis Wellausen nke e bipụtara na MundoGEO Magazine, nke na-echetara anyị na enweghị ike ịgbagha nke nkwupụta ndị ahụ Catastro2014 welitere site na FIG afọ iri abụọ gara aga, ọkachasị gbasara ịme ngosi uwe dịka ngbanwe nke ihe osise ọdịnala. Ntughari mkpebi nke ọnọdụ iji dochie anya ịka nká.
25,000 n'ụwa nile map dị maka download
Perry-Castañeda Library Map Collection bu ihe nchikota di egwu nke nwere ihe kariri 250,000 nke edeputara ma di na ntaneti. Imirikiti n'ime map ndị a dị na ngalaba ọha ma ihe dị ka 25,000 dị ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-egosi ụfọdụ maapụ dị na ...
Cartografia, Akụziri CAD / GIS, Internet na Blogs